Wararka - Sidee ayaynu si sax ah u xulannaa soosaarayaasha lathe CNC tayo sare leh
Ilaha ugu muhiimsan ee alaab-qeybiyeyaasha warshadaha farsamada farsamadu waxay ku urursan yihiin Pearl River Delta iyo gobolka Yangtze River Delta, halkaas oo tirada soosaarayaasha wax soo saarka CNC lathe ay sidoo kale yihiin koox aad u tiro badan. Marka sida saxda ah loo xusho soo saarayaasha wax soo saarka lathe CNC? Teknolojiyada makiinada Wally ayaa kaala hadli doonta:
Ugu horreyntii, ka hor inta aan la dooranin warshad farsameynta lathe CNC, waa inaan fahamnaa in soo-saaraha lathe CNC tayo sare leh uu leeyahay tayadaas, sida loo sameeyo heerka tayada sare leh?
1. Soosaarayaasha lathe CNC oo tayo sare leh waa inay marka hore fiiriyaan sawirka iyo dhaqanka shirkada. Sababta aasaasiga ah ee ay u adagtahay in dhaqan lagu sameeyo warshadaha makiinadaha ayaa ah in tayada guud ee shaqaaluhu ay liidato. Haddii warshad farsameysa lathe CNC ay leedahay muuqaal dibadeed oo wanaagsan iyo dhaqan shirkadeed, waxay muujineysaa in maareynta shirkaddu ay tahay mid aad u feejigan, oo leh tababar shaqaale oo fiican iyo uruurinta dhaqanka Astaamaha alaab-qeybiyeyaasha tayada leh.
2. Maaddada labaad ee warshad farsameysa lathe CNC oo tayo sare leh ayaa ah maareynta aasaasiga ah ee 7S. Marka la barbardhigo warshadaha elektarooniga ah, 7S ee warshadaha wax soo saarka farsamada ayaa ka sii adag in la hirgeliyo. Haddii qaabeynta 7S iyo hagaajinta aqoon isweydaarsiga uu aad u wanaagsan yahay, waa inaan ka qabannaa shaqo aad u wanaagsan qaybta 7S, meelaynta qalabka iyo jaangooynta hawlgalka Soo-saareyaasha ayaa yareyn kara dhacdooyinka alaabooyin badan oo cilladaysan, keenista ayaa noqon doonta mid waqtigeeda ka sii badan.
3. Hubi hirgelinta faahfaahsan ee nidaamka maareynta shirkadda, geedi socodka ka soo xigashada oraahda, hannaanka bixinta amarka, hannaanka horumarinta hannaanka, hannaanka xakamaynta tayada iyo hannaanka nidaamka. Haddii shuruudaha kor ku xusan la buuxiyo, waxay muujineysaa in howlaha shirkaddu sidoo kale ay yihiin kuwo aad u fiican oo leh astaamo tayo sare leh oo ah warshad farsameysa lathe CNC.
Erey ahaan, soosaarayaasha lathe CNC ee aadka u fiican waxay leeyihiin muuqaal qurxoon oo dibadeed iyo koox maareyn qaan gaar ah, iyo hawlgallada muddada-dheer waxay sameeyeen jawi dhaqan shirkadeed oo wanaagsan Aragtida tikniyoolajiyadda mashiinnada Volley ayaa ah in qalabaynta saxda ahi ay gacan ka geysan karto hal-abuurnimada tikniyoolajiyadeed. Waxaan rajeyneynaa in aan noqono processor heer sare ah oo duurka ku ah farsamaynta iyo gacan ka hal-abuurka Shiinaha iyo tikniyoolajiyadda.